वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहनुहुन्छ ? ‘मेगा एजुकेशन फेयर’मा जानुस् ! – BIG FM 101.2 MHz
Home » Featured » वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहनुहुन्छ ? ‘मेगा एजुकेशन फेयर’मा जानुस् !
वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहनुहुन्छ ? ‘मेगा एजुकेशन फेयर’मा जानुस् !
पोखरा, १५ साउन । दोस्रो सँस्करणको ‘मेगा एजुकेशन फेयर’ सोमबारदेखि पोखरामा शुरु हुँदैछ । पोखरा सभागृहमा हुने यो शैक्षिक मेलाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको आयोजक ‘वान अप प्रालि’ले जनाएको छ । शैक्षिक मेलामा सहभागिताका लागि प्रवेश निशुल्क रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
सोमबार विहान १० बजेदेखि पोखरा सभागृहमा यो मेला शुरु हुन लागेको हो । मेलाकै लागि भनेर यतिबेला पोखरा सभागृहलाई भव्य रुपमा सिंगारिएको छ । उद्घाटन समारोह अझै विशेष हुने आयोजकले बताएको छ ।
प्रशासनले दिउँसो गाडी चलाउन नदिए निर्माण सामाग्रीको मुल्य बढ्ने !
बिग न्यूज पोखरा, २२ असोज । दिउँसोको समयमा निर्माण सामाग्री बोक्ने सवारीसाधनहरु शहरभित्र चल्न नपाउने …